LEGO မှ minifigures များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ Batman ဖန်ခွက်အစုံ
LEGO မှ minifigures များကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ Batman မင်္ဂလာပါ
04 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 437 Views စာ0မှတ်ချက် 76023 အဆိုပါ Tumbler, ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler Scarecrow Showdown, 76240 Batmobile Tumbler, Batman, Batmobile, Dark Knight, Dc, ဂျိုကာ, Lego, Lego Batman, Lego Batmobile, Lego DC က, လူကြီးများအတွက် Lego, အသေးစား, သေးသေးလေး, The Dark Knight ဟာ, မှောင်မိုက် Knight ပြန်လာ, The Dark Knight ဟာ Rises, လူရွှင်တော်
အဆိုပါ Lego Group သည် Tumbler Batmobile အတွက်ကြီးမားသောပုံစံအသစ်ကိုမကြာမီဖြန့်ချိလိမ့်မည်၊ သို့သော် minifigures အသစ်များသည်အဟောင်းအမျိုးအစားနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်သနည်း။
နှင့် 76240 Batmobile Tumbler မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းနှင့် Dark Knight minifigures များပေါ်တွင်အခြေခံထားသော minifigures အသစ်များသုံးခု၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ Batmobile ၏လတ်ဆတ်သောမူကွဲအား၎င်း၏ဇာတ်ကောင်နေရာများသို့နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းကိုကြည့်ရန်အချိန်ရောက်ပါပြီ။
မူလ 76023 The Tumbler သည် minifigures နှစ်ခုသာပါလာသည် Batman Joker သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် The Dark Knight ၏သူရဲကောင်းလူကြမ်းအဖြစ်
ယခင်သူသည်အသုံး ၀ င်ခါးပတ်အတွက်သတ္တုရည်ကိုအသေးစိတ်တပ်ထားပြီးခြေထောက်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းမပါသောအနက်ရောင်အထင်ကရ ၀ တ်စုံကို ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ The Joker သည်မိတ်ကပ်ဖြည့်ထားသောမျက်နှာ၊ အစိမ်းရောင်ဆံပင်နှင့်ခရမ်းရောင်အ ၀ တ်အင်္ကျီတို့နှင့်ဆင်တူသည်။
ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး စလုံးသည်အသွင်အပြင်ကိုရရှိခဲ့သည် အသစ်ထုတ်ဖော်ပြသ 76240 Batmobile Tumblerဒါပေမယ့်ပထမဆုံးမျက်လုံးနဲ့တွေ့တာထက်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိတယ်။
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောမတ်တပ်ရပ် မှလွဲ၍ ယခုကြီးမားသောဒီဇိုင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည် Batman ထိုကဲ့သို့သောတည်ဆောက် ၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwingကွဲပြားမှုအများစုမှာသူ၏ခရမ်းရောင်ကုတ်အင်္ကျီကိုဖယ်ရှားပြီးသူ၏ပုံဖော်ထားသောအင်္ကျီများနှင့်အစိမ်းရောင်စွပ်ကျယ်ကိုပြသရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အစင်းအသေးစိတ်များကိုခြေထောက်များတွင်လည်းမြင်နိုင်သည်။
Batman ချက်ချင်းသိသာထင်ရှားသည့်ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအပိုင်းခွဲသံချပ်သားအဖြစ်လည်းကောင်းအသေးစိတ်အသုံးမ ၀ င်သောသတ္တုအရောင်အတွက်အရောင်ခြယ်ပုံကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေ။ ဤ minifigure သည်ပေါ်လာသောအရာနှင့်တူတူနီးပါးဖြစ်သည် ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdownသို့သော်အသေးစိတ်ခြေထောက်များနှင့်အသေးစိတ်ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့မပါပါ။
အသစ်နှစ်ခုလုံး Lego Batman Tumblers များကိုအောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်ပြီးနှစ်ခုထက်ပိုသောသေးငယ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူမကြာမီရရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီစုံတွဲကိုအမေရိကန်မှာကြိုတင်မှာယူနိုင်ပေမယ့်အခြားဒေသကဈေးဝယ်သူတွေကတော့ဖြန့်ချိမယ့်ရက်ကိုစောင့်ရလိမ့်မယ်။
← LEGO အဟောင်းတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ် Marvel ကျီစားရင်ဘာဖြစ်မလဲ ... ? ဇာတ်ကောင်?
Lego Star Wars 75309 Republic Gunship ဒီဇိုင်နာဗီဒီယိုကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် →